Ubuntu 20.10 inomira kugamuchira rutsigiro neChina. Gadziridza izvozvi | Linux Vakapindwa muropa
Gumiguru apfuura, Canonical yakakanda nyowani yakajairwa kutenderera vhezheni yako yekushandisa system. Iyo kambani inomhanya naMark Shuttleworth inotangisa vhezheni yeLTS makore maviri ega muna Kubvumbi inotsigirwa kwemakore mashanu, matatu mamwe manakiro ayo, nepo mamwe ese achitsigirwa kwemwedzi mipfumbamwe, zvinova zvitanhatu kusvika paiyo inotevera vhezheni pamwe nematatu emahara kugadzirisa. Mwedzi mipfumbamwe iyoyo ichasvika China chinotevera che Ubuntu 20.10.
Kutanga uyu China, Chikunguru 22, Groovy Gorilla haachazogashira zvigadziriso, saka inguva yakanaka kusvetukira muHirsute Mvuu yakaburitswa muna Kubvumbi gore rino. Iine "gorilla inotonhorera" yakasununguka kutenderera kuburitswa, hapana gakava rakawanda pano nezve chekuvandudza kune. Ubuntu 21.04 Haisi iyo LTS vhezheni futi, asi ichave inotsigirwa kwemamwe mwedzi mitanhatu.
Ubuntu 20.10 ichave EOL nemusi weChina 22
Iyo gorilla yeUbuntu 20.10 yakauya nenhau dzakadai seGNOME 3.38, Shell mune iyo Hirsute Hippo inochengetwa, Linux 5.8 uye yepamutemo uye yakasimbiswa rutsigiro rweiyo Raspberry Pi. Kune rimwe divi, Ubuntu 21.04 llegó neWayland nekukasira, Linux 5.11 uye kuenderera neGNOME 3.38, asi mashandisiro akaita kusvetukira kuGNOME 40. Canonical yaida kupa yakawanda nguva kunharaunda nyowani uye GTK4. Pepa hazviite senge hombe kuvandudza, asi ndiyo chete inowanikwa panguva ino kune avo vasingade kusiiwa vasina rutsigiro.
Inofanira kuyeukwa kuti kunyangwe Canonical iri inonyatso tarisa vhezheni neGNOME graphical nharaunda, yayo zvinomwe zvinonaka zvepamutemo, ayo ari Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio uye Ubuntu Kylin, vachamira zvakare kuwana rutsigiro China chinotevera, saka vanofanirwa kugadzirisa zvakare. Kana iyo yekushandisa isingapi sarudzo yacho yega, unogona kuvhura terminal uye nyora uyu murairo:
Pane imwe yakanyorwa, tevera mirairo iri pahwindo. Kuchine mazuva matatu asara, asi isu tinofanira kuzviita izvozvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu 20.10 inomira kugamuchira rutsigiro neChina. Gadziridza izvozvi
Uye kufunga kuti kuchine mazana ezviuru zvevashandisi vanochengeta iyo 20.04 uye 20.10. Iwe watove kuda kutaridzika se fedora ubuntu.
20.04 inonzwisisika nekuti inotsigirwa kusvika 2025 uye kune vanhu vanofarira kugadzikana pane nhau. Iyo 20.10 inonyanya kushamisa. Ini ndinogadziridza zuva rimwe chete kana rinotevera.
Cesar de los RABOS akadaro
Zvakanaka ... ndanga ndichishandisa Debian "kusvina" kudanana, zvese zvakanaka, asi zvirokwazvo; Firefox haisisina rutsigiro rwe gtk2 -Zvino ini ndinoshandisa yakagadziridzwa chaiyo muchina-. Ichiri chakanyanya kugona - mumasekondi matanhatu ini ndiri kupinda mukati,, ini ndakabhoinura sisitimu yangu yekushandisa (kuteedzera kuchikamu) mune gumi nemaviri ekare macomputer emazuva ano uye ZERO PROBLEMS. Ichi ndicho chikonzero ini ndinofarira Debian; Iwe unoshandura makomputa uye haufanire kudzoreredza iyo inoshanda, ini handisati ndambozviita naUbunto, asi zvinofanirwa kunge zvakafanana!
Pindura César de los RABOS
HandBrake 1.4 inouya nerutsigiro rweFFmpeg 4.4 uye Apple's M1, pakati pevamwe